Gudidii G11 Ee Khaatumo State Oo Bayaan Ka Soo Saaray Heshiiska Mamulada Khatomo Iyo Somaliland – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaWararka DalkaSomalilandKhaatumo StateGudidii G11 Ee Khaatumo State Oo Bayaan Ka Soo Saaray Heshiiska Mamulada Khatomo Iyo Somaliland
Gudidii G11 Ee Khaatumo State Oo Bayaan Ka Soo Saaray Heshiiska Mamulada Khatomo Iyo Somaliland
Deegaammada Maamul Goboleedka Khaatumo Somalia
Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee khaatumo waxaa lagu aasaasay 12 janaayo sanadkii 2012ka magaalada taariikhiga ah ee Taleex. Ergooyin kor u dhaafay afar kun (4000) oo qof oo isugu jira isimo, cuqaal, culimo u diin, bulshada rayidka ah, siyaasiyiin iyo aqoon yahanno ayaa kasoo qayb galay shirkaas taariikhiga ahaa ee lagu qabtay Berdo Khaatumo, Taleex. guddi laga dhex xushay ergooyinkaas, isuguna jirey dumar iyo rag, gaadhayeyna 400 oo qof ayaa gorfayn iyo rogrogid dheer kagadaal isla qaatay samaynta maamul goboleedka soomaliyeed ee Khaatumo. maamulkaas wada tashiga buuxa lagu aasaasay wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood ama laamood oo dastuuri ah: golaha sare ee dhaqanka, golaha baarlamaanka iyo golaha fulinta.
Golaha sare ee dhaqanku waa hay’adda ugu sareysa laamaha dastuuriga ah ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka soomaaliyeed ee Khaatumo. Awoodahooda dastuuriga ahna waxaa kamid ah ansixinta iyo wax ka dhihidda wax kasta oo ka baxsan hawl maalmeedka dowladda ama hay’adda fulinta sida heshiisyo ama wada hadallo lala gelayo maamulada kale iyo wax kasta oo saamaynaya mustaqbalka iyo jiritaanka bulshada ku nool Sool, Sanaag iyo cayn (SSC).
Waxa kale oo dastuurka maamul goboleedka khaatumo ku cad samaynta saddex guddi oo kala ah: guddiga dastuuriga ah ee amniga, dhaqaalaha iyo wadahadalada lala gelayo cid kasta oo ay xukuumadda arimo kaga xidhan yihiin, hadday noqon lahayd gudaha maamulka iyo maamulada hareeraha ka xiga. Waxaa dastuurka khaatumo ku cad in gudigaas dastuuriga ah ay siwada jira u ansixiyaan golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo golaha sare ee dhaqanka.
Degaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo wax horumara ama caawin ah oo laga hirgeliyey majiraan laga soo bilaabo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. Waxaa si xaq daro iyo gobood falnimo ah ugu sunteen labada maamul ee Somali Land iyo Punt Land inay yihiin degaanno laysku haysto oo aan wax horumar iyo gurmad toona beesha caalamku ka fulin karin, taasoo sababtay in deegaankani ka hadhay dhamaan degaanada kale ee soomaaliyeed.
Intaas waxaa u sii dheer in maamulka Somali Land ku qabsaday xoog caasimadda maamul goboleedka Khaatumo ee Laascaanood markay taariikhdu ahayd 15kii Oktoobar 2007, iyadoona ilaa hadda uu maamulkaasi si xoog ah, tacadi badanina ku jirto ugu sugan yahay caasimadda laascaanood. Qabsashadan Somali Land degaanada Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo waxay sababtay iska horimaad hubeysan iyo u daadasho dhiigga labada shacab si xigmad la’aana. Sidoo kale maamulka Punt Land waxay si booba gacanta ugu haysaa magaalooyin ku yaala xadka labada maamul, iyadoo ka samaysatay xarumo cashuurta si sharci daro ah loogu qaado. Lacagaha laga urursado magaalooyinkaa xadka ku yaala wax kasoo gaadha oo dib loogu soo celiyaana ma jiraan bulshada reer Khaatumo ee degaanadaas xoogga lagu haysto ku nool.
Inkastoo sababaha ugu waaweyn ee Khaatumo loo aasaasay ay ahayd ka hor tegidda dagaallo dhex mara iyada iyo labada maamul ee PL iyo SL, haddana waxay labadaas maamul ee deriska la ah Khaatumo wacad ku mareen inay si iskaashi ku jiro uga hortagaan caga isku taagga maamulkan Khaatumo, iyadoo maamulka Punt Land sheeganayo inay dadka reer Khaatumo dhiig iyo dhalasho wadaagaan, meesha kan Somali Landna ku andacoonayo in qarnigii tegey guumeystihii Ingiriisku wada qabsaday. Sheegashooyinkani waxay si cad u dhinac marayaan doonista shacabka reer Khaatumo siday u samaysan lahaayeen maamul lasiman kuwa ay dadkooda u yagleeleen, iyo sooyaalka taariikheed ee ay ku leeyihiin mandaqadda Geeska Afrika taasoo keenaysa colaado iyo horumar la’aan joogta ah oo soo wajahda dhamaanba shuccubta degaanadaas. Burburkaas ba’anna waxaa keliya oo lagaga hortegi karaa dadka reer Khaatumo oo faraha looga qaado doonistooda ah inay samaystaan maamul goboleed iyo ismaamul ay leeyihiin oo xubin firfircoon ka noqda dowladda federaalka Soomaaliya, nabadna kula noolaada maamulada kale ee deriskooda ah
Inkasta oo golaha Guurtida Khaatumo soo dhoweynayo wadahadal kasta oo lala gelayo maamulada hareeraha si loo gaadho nabad waarta iyo derisnimo wanaag, haddana waxaannu qabnaa inaan wadahadaladani sinnaba uga habaabin ama uga weecan ahdaafta loo dhisay Khaatumo ee ahayd horumarinta degaanadooda iyo gacan ku haynta masiirkooda iyo jiritaankooda umadeed. Wadahadal kasta oo lala gelayo cid kalena waa inay isla qaataan hayadaha loo asteeyey arimahan masiiriga ah sida xukuumadda, baarlamaanka, golaha sare ee dhaqanka iyo guddigii dastuuriga ahaa ee loogu tala galay wadahadal kasta oo lala gelayo cid kale. Wada hadalkasta oo cid kale lala gelayo waa inay ansixiyaan golaha sare ee dhaqanku iyadoo laga duulayo qodobadan soo socda:
1. Dad weynaha reer Khaatumo waxay goosteen, kuna cadeeyeen dastuurkooda maamul goboleedka Khaatumo ka go’naanshaha inay ahaadaan ismaamul hoos yimaada dowladda federaalka Soomaliya, iyagoona ugu baaqaya dowladda dhexe ee Soomaaliya inay si qotodheer oo masuuliyad qarannimo ku dheehan tahay u tixgeliso rabitaanka shacabka Khaatumo, ilaalisana midnimada iyo badbaadinta qaranka ay u dhaarteen, bulshada reer Khaatumana u soo galeen halgankii Daraawiisheed ee ugu dheeraa geeska Afrika.
2. Wadahadal kasta oo lala geleyo Somali Land ama cid kale oo danta reer Khaatumo gasho waa inay hogaamisaa gudi qaran oo kalsooni ka haysata laamaha dowladda sida ku cad dastuurka Khaatumo. Sidoo kale waa inay ansixiyaan golaha sare ee dhaqanku heshiis kasta oo kasoo baxa wadahadaladaas, lana qeexa waxa u cuntami kara shacabka reer Khaatumo iyo waxa aan u cuntami karin wadahadalada ka hor.
3. Gaar ahaan wadahadal kasta oo lala gelayo maamulka Waqooyi Galbeed/Somali Land ee sida xoogga ah ku haysta dhulka reer Khaatumo waa inuu ka dhaco meel dhexdhexaad ah, goobjoogna ay ka ahaadaan wakiilo ka socda beesha caalamka.
4. Wadahadal kasta oo lala gelayo Somali Land mustaqbalka waa inay ka horeeysaa horumar lataaban karo, lana caddayn karo oo laga gaadho arrimaha aasaasiga u ah reer Khaatumo sida kabixitaanka ciidamada Somali Land dhulka khaatumo oo dhan ee ay xoogga ku haysato, iyo abuurista jawi nabadeed oo saamixi kara in labada shacab si nabada ugu wada noolaan karaan gobolka.
Ugu danbayn wuxuu golaha guurtidu ku baaqayaa in lasoo afjaro cadaadiska iyo dulmiga ku socda shacabka reer Khaatumo, iyadoo latixgelinayo xaqa reer khaatumo u leeyihiin ugu noolaanshaha degaankooda si nabada. Sidoo kale waxaanu ku baaqaynaa in cid kasta oo jecel cadaaladda iyo nabadda ay ku taageeraan shacabka reer Khaatumo doonista aaya katalintooda.
Guurtida Khaatumo (Guddi Talo Bixineed)
Khaatumo State	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousTirada Dadkii Ku Dhintay Dabkii Grenfell Tower Ee London Oo Korodhay
NextUgu Danbayn CXDS Oo Kala Diray Maleeshiyo Beeledkii Gobolka Hiiraan Ku Dagaalamaayey
Khaatumo State	Galayr: Hargaysa Wax LagaHungureeyaa Ma Yaalaan Waxaan Ku Qancayaa Nabad Aan Ku Wada Noolaano	26th March 2017
Caalamka	Faysal Cali Oo Ka Hadalay wadahadalka Uga Furmay Maamulada Khaatumo Iyo Somaliland Magaalada Jabuuti	26th March 2017
Wada-hadalka u dhaxeeya Somaliland iyo Khaatumo ayaa galay wajiga saddexaad, kaddib markii uu shalay dib uga furmay magaalada Jabuuti.